သင့်အလံကို တိုင်ထိပ်အထိ လွှင့်ထူပါ
သင့်ခန္ဓာကို ရဲရဲတောက် လှစ်ဟဖြန့်ကျက်ပါ
ksanchaung Thu Jan 01, 10:12:00 PM GMT+8
တို့ အစ်မ၊ ၂၀၁၅ မှာ စာတွေ အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ။ ရေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ပြီးသားပါ။ ရေးဖြစ်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်။ ဟုတ်တယ် ဟုတ်။
blackroze Fri Jan 02, 03:49:00 AM GMT+8
အောင်မြင်တဲ့ 2015 ဖြစ်ပါစေ မကြီးချစ်..
Thandar Lwin Fri Jan 02, 12:18:00 PM GMT+8
အိမ်မက်တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ အတူတူလွှင့်ထူကြမယ်လေ
Aunty Tint Sun Jan 04, 12:08:00 AM GMT+8
အားလုံးအတွက် ဆန္ဒနဲ့လက်တွေ့ ထပ်တူကျနိုင်တဲ့ သက္ကရာဇ်ဖြစ်ပါစေ မချစ်ရေ....
Unknown Tue Jan 20, 07:45:00 PM GMT+8
Unknown Tue Jan 20, 07:46:00 PM GMT+8
Unknown Tue Jan 20, 07:47:00 PM GMT+8
Unknown Tue Jan 20, 07:48:00 PM GMT+8
Unknown Tue Jan 20, 07:49:00 PM GMT+8
elasmr84 Wed Jan 04, 03:09:00 PM GMT+8
Unknown Sun Feb 05, 01:22:00 PM GMT+8
If you are being assured 24/7 Customer Care and life time replacement then do not think again after you Buy facebook reviews fromaservice provider. facebook reviews
နှမ်းမနဲ မွှေးမွှေးလေး - ဒီနေ့တော့ အရမ်းစားလို့ ကောင်းလွန်းတဲ့ နှမ်းမနဲလေး ထိုးဖြစ်ပါတယ် ဒီနှမ်းမနဲလေးကိုတော့ အရောင်လှစေရန်အတွက် ကောက်ညှင်းဆန် အဖြူ ရယ် ကောက်ညှင်းငချိ...
ဘူတီဂြိနဲ့ ကလပျကဘေယျ … - *ဘူတီဂြိ* ဘူတီဂြိ Pete Buttigieg က ၂၀၂၀ သမ်မတရှေးကောကျပှဲမှာ အငျဒီးယားနားပွညျနယျကနေ ပါဝငျယဉျပွိုငျသူတယောကျ။ ဒီမိုဂရကျပါတီကနေ ပါဝငျယှဥျပွိုငျသူ ဆယျ့ငါးယောကျ...
မိုးရှာတိုငျးလှမျး..... - ပိတျရကျရှညျတုနျးက Joox ထဲက ဒီနှဈ မိုးရာသီ သီခငျြးတှစေုစညျးထားတာ ဝငျကွညျ့တော့ ကြှနျမတခါမှ နားမထောငျဖူးသေးတဲ့ ရော့ချအဖှဲ့အသဈလေးတဈခုဖွဈတဲ့ Born for Yo...
ချစ်သော ရန်ကုန် - ရန်ကုန်ကို ကျွန်မ ချစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့အကြောင်းကို စာစီစာကုံးတစ်ပုဒ်အဖြစ် ရေးဖွဲ့သီကုံးပြပါဟု ဆိုလျှင် ရန်ကုန်တွင် နှစ်သုံးဆယ်နီးပါး နေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရသူ...